Ndị nchụàjà ga-adị nsọ, ha ga na-erikwa ihe dị nsọ (1-16)
Naanị anụmanụ ahụ́ dị mma ka Chineke na-anabata (17-33)
22 Jehova gwakwara Mosis, sị: 2 “Gwa Erọn na ụmụ ya ndị nwoke ka ha kpachara anya n’otú ha si emetụ ihe ndị dị nsọ ndị Izrel na-eweta aka nakwa ihe ndị ha na-enye m,+ ka ha ghara imebi aha nsọ m.+ Abụ m Jehova. 3 Sị ha, ‘N’ọgbọ unu niile, nwa unu ọ bụla bịara nso n’ihe ndị dị nsọ ndị Izrel na-ewetara Jehova mgbe ọ na-adịghị ọcha, a ga-egbu ya.*+ Abụ m Jehova. 4 Nwoke ọ bụla bụ́ nwa Erọn nke na-arịa ekpenta+ ma ọ bụ nke ihe na-agbapụta n’ahụ́+ agaghị eri ihe dị nsọ ruo mgbe ọ dịrị ọcha.+ E nweghị nwoke ga-eri ya ma ọ bụrụ na o metụrụ onye na-adịghị ọcha aka, ya bụ, onye na-adịghị ọcha maka na o metụrụ onye nwụrụ anwụ*+ aka. Nwoke ọbara ọcha na-agbapụta n’ahụ́ agaghịkwa eri ya.+ 5 Nwoke metụrụ obere anụmanụ* na-adịghị ọcha aka+ ma ọ bụ nwoke metụrụ onye na-adịghị ọcha aka bụ́ onye nwere ike ime ka ọ ghara ịdị ọcha agaghịkwa eri ya.+ 6 Onye* ọ bụla metụrụ ihe ọ bụla n’ime ha aka ga-abụ onye na-adịghị ọcha ruo mgbede. Onye ahụ agaghịkwa eri ihe ọ bụla dị nsọ, kama ọ ga-eji mmiri saa ahụ́.+ 7 Ọ ga-adị ọcha mgbe anyanwụ dara. E mechaa, o nwere ike iri ihe si n’ihe ndị dị nsọ maka na ọ bụ nri ya.+ 8 Ọ gaghịkwa eri anụ ọ bụla nwụrụ anwụ ma ọ bụ ihe ọ bụla anụ ọhịa dọgburu, ka ọ ghara ime ka ọ bụrụ onye na-adịghị ọcha.+ Abụ m Jehova. 9 “‘Ha ga na-eme ihe niile m chọrọ ka ha na-eme ka ha ghara imehie maka na ha emeghị ya, ha ewee nwụọ maka na ha na-emebi iwu m. Abụ m Jehova, onye na-eme ka ha dị nsọ. 10 “‘Onye ọ bụla na-esighị n’ezinụlọ ndị nchụàjà* agaghị eri ihe ọ bụla dị nsọ.+ E nweghị onye mbịarambịa binyeere onye nchụàjà ma ọ bụ onye ọrụ o goro ego ga-eri ihe ọ bụla dị nsọ. 11 Ma ọ bụrụ na onye nchụàjà ejiri ego ya zụta mmadụ,* onye ahụ nwere ike iso ya na-eri ihe dị nsọ. Ndị ohu a mụrụ n’ụlọ ya nwekwara ike iso ya na-eri nri ya.+ 12 Ọ bụrụ na nwa onye nchụàjà alụọ nwoke na-abụghị onye nchụàjà,* ọ gaghịzi na-eri ihe si n’onyinye ndị dị nsọ. 13 Ma ọ bụrụ na a gbaa nwa onye nchụàjà alụkwaghịm ma ọ bụkwanụ di ya anwụọ, ma ọ mụtaghị nwa, o wee laghachi n’ụlọ nna ya biri otú o bi mgbe ọ ka bụ agbọghọ, o nwere ike ịna-eri nri nna ya.+ Ma onye ọ bụla na-esighị n’ezinụlọ ndị nchụàjà* agaghị eri ya. 14 “‘Ọ bụrụ na mmadụ erie ihe dị nsọ n’amaghị ụma, ọ ga-akwụ ụgwọ ihe ahụ o riri, wetakwa otu ụzọ n’ụzọ ise nke ihe ahụ ma were ha nye onye nchụàjà.+ 15 N’ihi ya, ha agaghị emerụ ihe ndị dị nsọ ndị Izrel na-ewetara Jehova+ 16 wee mee ka ndị Izrel taa ahụhụ mmehie ha maka na ha riri ihe ndị dị nsọ; n’ihi na abụ m Jehova, onye na-eme ka ha dị nsọ.’” 17 Jehova gwakwara Mosis, sị: 18 “Gwa Erọn na ụmụ ya ndị nwoke nakwa ndị Izrel niile okwu, sị ha, ‘Mgbe onye Izrel ọ bụla ma ọ bụ onye mbịarambịa bi n’Izrel na-ewetara Jehova àjà a na-esu ọkụ+ ka o jiri ya mezuo nkwa o kwere ma ọ bụ ka ọ bụrụ onyinye si ya n’obi ọ na-enye Chineke,+ 19 ọ ga-esi n’ìgwè ehi ma ọ bụ n’ụmụ ebule ma ọ bụ n’ìgwè ewu weta oké nke ahụ́ dị mma,+ ka e wee nabata onyinye ya. 20 Unu ewetala ihe ọ bụla nwere nkwarụ+ n’ihi na ọ ga-eme ka Chineke ghara ịnabata unu. 21 “‘Ọ bụrụ na mmadụ na-ewetara Jehova àjà udo+ ka o jiri ya mezuo nkwa o kwere ma ọ bụ ka ọ bụrụ onyinye si ya n’obi ọ na-enye Chineke, ọ ga-esi n’ìgwè ehi ma ọ bụ n’ìgwè ewu na atụrụ weta anụmanụ ahụ́ dị mma ka e wee nabata onyinye ya. Anụmanụ ahụ agaghị enwe nkwarụ ọ bụla. 22 A gaghị eweta anụmanụ kpuru ìsì, nke ọkpụkpụ ya gbajiri agbaji, nke ihe chawara ahụ́, nke nwere ákpụ̀, akpụkpa ma ọ bụ ọkpụisi eri ngo. Unu ewetakwarala Jehova anụmanụ ọ bụla nwere nke ọ bụla n’ime ihe ndị a ma ọ bụ jiri ya chụọrọ Jehova àjà n’ebe ịchụàjà. 23 Unu nwere ike iji ehi ma ọ bụ atụrụ otu ụkwụ ya ma ọ bụ otu aka ya dị ogologo ma ọ bụ dị mkpụmkpụ karịa ibe ya nye onyinye si unu n’obi. Ma a gaghị anabata ya ma unu weta ya ka unu jiri ya mezuo nkwa unu kwere. 24 Unu ewetarala Jehova anụmanụ mkpụrụ amụ ya mebiri emebi ma ọ bụ nke a kụpịara mkpụrụ amụ ma ọ bụ nke a pịrị amụ. Unu ejikwala anụmanụ dị otú ahụ achụ àjà n’ala unu. 25 Unu anatala onye mbịarambịa nke ọ bụla n’ime anụmanụ ndị ahụ ka e jiri ya chụọ àjà ka ọ bụrụ achịcha* Chineke unu n’ihi na ha rụrụ arụ, nweekwa nkwarụ. Chineke agaghị anabata ha.’” 26 Jehova gwakwara Mosis, sị: 27 “Ọ bụrụ na a mụọ oké ehi ma ọ bụ ebule ma ọ bụ ewu, ya na nne ya ga-anọ ruo ụbọchị asaa.+ Ma malite n’ụbọchị nke asatọ gawa, Jehova ga-anabata ya ma e jiri ya chụọrọ ya àjà, ya bụ, àjà a na-esu ọkụ. 28 Unu egbula ehi ma ọ bụ atụrụ na nwa ya n’otu ụbọchị.+ 29 “Ọ bụrụ na unu achụọrọ Jehova àjà iji kelee ya,+ unu ga-achụ ya otú ga-eme ka ọ nabata ya. 30 A ga-eri anụ àjà ahụ n’ụbọchị ahụ. Unu edofọla ihe ọ bụla n’ime ya ruo ụtụtụ.+ Abụ m Jehova. 31 “Na-edebenụ ihe m nyere n’iwu, na-emekwanụ ha.+ Abụ m Jehova. 32 Unu emebila aha nsọ m.+ A ga-edokwa m nsọ n’etiti ndị Izrel.+ Abụ m Jehova, onye na-eme ka unu dị nsọ,+ 33 onye kpọpụtara unu n’Ijipt iji gosi na m bụ Chineke unu.+ Abụ m Jehova.”
^ Ma ọ bụ “mkpụrụ obi ahụ.”
^ Ma ọ bụ “alụọ onye mbịarambịa.”
^ Ma ọ bụ “ihe oriri,” ya bụ, àjà dị iche iche a na-achụ.